भक्तपुरमा आजसम्म नखोलिएका रहस्यमयी ४ ढोकाहरु (ऐतिहासिक खोज) – Idea Khabar
भक्तपुरमा आजसम्म नखोलिएका रहस्यमयी ४ ढोकाहरु (ऐतिहासिक खोज)
आइडिया खबर२०७६ भाद्र ३, मंगलवार १४:३०
भक्तपुर – भक्तपुर सांस्कृतिक विविधता तथा नेपाली संकृतिको धरोहरको रुपमा चिनिन्छ । यहाँको सम्पदा तथा सस्कृतिको अध्ययन गर्ने कुरा भने निकै कठिन छ। तर पनि यो सुन्दर शहर नेपाली प्राचिन कलाले भरिपुर्ण छ , त्यस्तै भक्तपुरमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेका थुप्रै कुराहरु छन । र यो रहस्यको बिषय बनेको छ। यस्तै रहस्य मध्य भक्तपुरमा रहेका केही ढोकाहरु रहस्यमही रुपमा अहिले सम्म पनि रहेका छन् ।
भक्तपुर क्षेत्रभित्र थुप्रै ठाउँ छन् जहाँ सर्वसाधारणलाई जान मनाहि गरिएकोछ। तर भक्तपुरमा त्यस्ता ठाउँ पनि छन् जहाँ आजसम्म कोहि पनि गएका छैनन् । तपाईलाइ सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ नेपालमा यस्ता ठाउँहरु थुप्रै छन् तर भक्तपुरका केहि त्यस्ता ढोका छन् । जुन आजसम्म खोलीएका छैनन् न त त्यसको कारण कतै खोजि गरिएको नै छ ।
भक्तपुरमा रहेका यि ढोकाहरु खोल्न वैद्धिक मन्त्र चाहिन्छ भन्ने जनबिश्वास रहेको छ तर यी मन्त्रहरु लेखिएका पत्रहरु हराइ सकेकाले मन्त्रहरु पाउन नसकिएको भक्तपुर क्षेत्रमा अध्यन अनुसन्धान गरिरहेको संस्था Ancient NEPAL ले जनाएको छ । सोधकर्ताहरुका अनुसार किम्बदन्ति सहि साबित भए अब यी ढोकाहरु खोल्न असम्भव नै देखिन्छ ।
१. दुमाजु चोकको प्रस्तरको ढोका
भक्तपुरको तलेजु परिसर भित्र रहेको दुमाजु चोकको उत्तर पश्चिम कुनामा एउटा साधारण ढोका देखिन्छ । लाग्छ त्यो एउटा सानो प्वाल मात्र हो । त्यो संगै लामा २ ढुंगा देखिन्छन् । तर आजसम्म यो ढोका खोल्न सकिएको छैन । किम्बदन्ती मान्ने हो भने एक ताडपत्र (अप्रकाशित ) मा उल्लेख भए अनुसार दुई पंतीको मन्त्र पढे पछि मात्र यो ढोका आफै खोलिन्छ ।
यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेका भारतिय प्राध्यापकका (नाम गोप्य राखिएको) को अनुसार यो ढोका रहेको मन्दिर मुनि खाली ठाउँ रहेको छ भन्ने छ तर आजसम्म कोहि पनि जान पाएका छैनन् ।
२. कुमारी चोकको ढोका
तलेजु मन्दिरको पश्चिमपट्टि रहेको कुमारी चोकमा सर्वसाधारणलाई जान मनाहि छ। दसैंको बेला यो चोकमा एकान्त कुमारीलाई यहाँ बिराजमान गराइ पुजा गरिन्छ। यो चोक निकै सुन्दर छ। राजा जितामित्र मल्ल (१७२९-१७६७) को पालामा यो चोकलाइ १४ बर्ष लगाएर सजाइएको थियो भन्ने गरिन्छ । यो चोकको दक्षिण पट्टि कलात्मक ढोका छ जसमा नागहरुको बुट्टा छन् । त्यही ढोकामा अभिलेख पनि छ यो ढोका खोलेमा तत्काल मृत्यु हुने कुरा लेखिएको छ र यो ढोका खोल्न पनि मिल्दैन। आजसम्म यो ढोका खोलिएको पनि छैन। राणाकालमा यो चोकमा उत्खनन गर्न भनि खनिएको थियो तर खन्दा खन्दै अचानक ठुलो आपत आएकले बन्द गरियो भन्ने गरिन्छ । त्यो दिन देखि यो ठाउँमा केही गरिएको छैन। अहिले पनि मानिसहरु यो ढोका भित्र बहुमुल्य सामान लुकाएको छ भन्ने बिश्वास गदर्छन्।
३.भण्डारखाल पोखरी भित्रको ढोका
भक्तपुर राज दरवार भित्री दुमाजु चोकमा भण्डारखाल पोखरी रहेको छ। यो पोखरी भित्र पनि गोप्य ढोका रहेको छ भन्ने किम्बदन्ती पाइन्छ। उक्त पोखरीमा दशैंमा देबतालाई बलि दिए पछि धोएको कपडाको रगत तल इन्द्रायणी पिठबाट निस्किन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। पुरातनविदहरु यो पोखरीमा रहेको ढोकाबाट नै पानी आएको अनुमान गर्दछ्न् । यो ढोकालाई पानीले छोपेकाले देख्न सकिँदैन यो पोखरीमा अलैकीक शक्ति छ भन्ने बिश्वासले मानिसहरु त्यहाँ कहिल्यै जाँदैनन् ।
४.तचपाल दत्तत्राय मन्दिर पछाडीको द्वार
यो ढोका भक्तपुर राजदरबार क्षेत्र भन्दा बाहिर छ। भक्तपुरको तचपाल टोलमा पर्ने १५ औं शताब्दीमा निर्मित दत्तत्राय मन्दिरको पछाडि एउटा सानो द्वार रहेको छ। उक्त द्वारबाट भारतको काशीनाथ पुगिन्छ भन्ने बिश्वास गरिन्छ। त्यसैले यो द्वार पनि आजसम्म खोलिएको छैन । सोधकर्ताहरुले गरेको अनुसन्धानमा केहि तथ्यहरु पत्ता लागेपनि त्यसको बारेमा आवाश्यक खोज गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपालको पौराणिक एबं वैद्धिक प्रविधि र मन्त्र बिज्ञानको आधारमा बनाईएको भनिएका यस्ता ढोकागरुको वास्तविक रहस्यको प्रमाणित गर्न सके पश्चिमा भौतिक र रासायनिक बिज्ञान भन्दा माथि जान सकिन्छ ।
मनसुन अझै सक्रिय : भारी वर्षाको सम्भावना, सचेत रहन आग्रह
२०७६ असार ३०, सोमबार १४:०८
२०७६ श्रावण २१, मंगलवार १०:५६